जेठ २६ – डब्लूडब्लूई र यस्तै प्रकारका केही व्यवसायीक रेसलिङमाथि धेरैपटक प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा हुने झगडा झुटो र पूर्वनिर्धारित हुन्छ भन्ने धेरैको टिप्पणी रहेको छ । यो कुरा साँचो हो कि यी झगडा पूर्ण रुपमा वास्तविक हुँदैनन् । आज हामी तपाईंलाई डब्लूडब्लूईसँग जोडिएका केही रोचक तथा अपत्यारिला तथ्यबारे जानकारी दिँदै छौं ।
१. दर्शकको प्रतिक्रियामार्फत तय हुन्छ विजेताः
डब्लूडब्लूईको उद्देश्य झगडामार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने हो । यस्तोमा झगडापूर्व नै दर्शकको प्रतिक्रिया हेरेर विजेता घोषित गरिन्छ । एक स्पोर्टस वेबसाइटका अनुसार फाइट स्क्रिप्टमा आधारित हुन्छ ।
– थुप्रै पटक यदि झगडाको क्रममा दर्शकको प्रतिक्रिया परिवर्तन भयो वा राम्रो भएन भने रेसलरसँग अर्को प्लान पनि हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि राम्रो शरिर र प्रस्तुती दिने रेसलरको मात्र जित हुनेछ भन्ने छैन ।
२. झगडाको क्रममा केही चोट वास्तविक भएपनि अन्य नाटक नै हुन्छः
डब्लूडब्लूईमा फाइटको क्रममा हुने खतरनाक स्टन्ट नै दर्शकलाई मनपर्छ । स्टन्टका लागि विशेष तालिम दिइएपनि रेसलरलाई चोट लाग्छ । यद्यपी, यी चोट सामान्य हुन्छन् तर मनोरञ्जनलाई ध्यानमा राखेर यसलाई बढाई–चढाई देखाइन्छ ।
३. आफ्नो अर्को कदमका लागि प्रतिस्पर्धीलाई बताउने गर्छन् रेसलर्सः
फाइटको क्रममा रेसलरलाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको प्रत्येक व्यवहार र चालको जानकारी हुन्छ । थुप्रै पटक दुबैले एक अर्कालाई यसको संकेत पनि दिन्छन् । स्टन्टको तालिमको क्रममा रेसलरलाई ठूलो चोट लाग्नबाट कसरी बचाउने भन्ने बारे सिकाइन्छ । यसलाई स्पट कलिङ भनिन्छ ।
४. ७० प्रतिशत हतियार सक्कली हुन्छ तर रेसलरलाई दिइन्छ तालिमः
डब्लूडब्लूइमा हथौडा, स्टिलको चेयर, टेबल, ल्याण्डर र डण्डाजस्ता हतियार सधैं महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले यसको प्रयोग एक्सट्रीम च्याम्पियनशीप रेसलिङमा भएकमो थियो । त्यसपछि डब्लूडब्लूएफको एटीट्युड एरा अर्थात् सन् १९९७ देखि सन् २००१ सम्म अत्यधिक प्रयोग भयो ।
यद्यपी, पछि यसमा केही परिवर्तन गरियो । रिंगको मुनी भएका ७० प्रतिशत हतियार वास्तविक हुन्छन् तर यसलाई फाइटका लागि विशेष प्रकारले बनाइएको हुन्छ । यसको अर्थ यो हो कि यो हेर्दा पूर्ण रुपमा सक्कली देखिएपनि त्यसको संरचना, तौल र कडाईलाई निकै हदसम्म कम गरिएको हुन्छ । यसका साथै यसको प्रयोग गर्नमा पनि विशेष तालिम दिइएको हुन्छ ।
५. रगत निस्कने पनि हुन्छ तालिम, रेफ्रीले गर्दछ मद्दतः
डब्लूडब्लूई फाइटमा सबैभन्दा अचम्म गरिदिने कुरा के छ भने रेसलरको शरिरमा देखिने रगत वास्तविक हुन्छ । थुप्रै पूर्वनिर्धारित फाइटको क्रममा रेफ्री आफै रेसलरलाई एक रेजर दिन्छन् जसलाई छुँदामात्र पनि रगत निस्कने गर्दछ । त्यसपछि रेसलरले आफ्नो हातले उक्त रगतलाई फैलाउने गर्दछन् । यसले दर्शकलाई यस्तो भ्रम पैदा गर्छ कि चोटका कारण रेसलरको रगत बग्न थालेको छ । यो कदमलाई ब्लेड वाइपिङ पनि भनिन्छ ।
‘इन्टर कलेज क्रिक्सल २०७४’ को उट्घाटन (हेर्नुस तस्वीर सहित)
काठमाडौं, जेठ २३ – त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टद्वारा आयोजित इन्टर कलेज क्रिक्सल २..